बिहानको ०३ : १६
rajdhanidaily.com . ११ महीना अघि
काठमाडौं। सरकारले दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । उत्पादन मूल्य र लागत मूल्य बढेको भन्दै दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास चक्रपाणि खनालले किसान र व्यवसायीको मागअनुुसार...
setopati.com . ११ महीना अघि
लगातार बढेर ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको सुनको मूल्य बुधबार भने घटेको छ। नेपाली बजारमा मंगलबार अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य कायम गरेको सुन बुधबार ७ सय रुपैयाँले घटेर ७० हजार ३ सय पुगेको छ। मंगलबार एक त...
दूधको मूल्य बढाउन दबाब बढेपछि कार्यदल गठन
reportersnepal.com . ११ महीना अघि
काठमाडौं ३० साउन । किसानले दूधको मूल्य बढाउन दबाब दिएपछि सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । दूधको उत्पादन लागतका आधारमा अध्ययन गरी मूल्य सिफारिस गर्नका लागि बुधबार कृषि तथा पशुपंक्षी...
सुनको मूल्य तोलामा सात सय घट्‍यो, कारोबार भने न्यून
baahrakhari.com . ११ महीना अघि
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (बुधबार) सुनको मूल्य केही घटेको छ । हिजो मंगलबार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज ७ सय घटेर प्रतितोला ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । ...
सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड, तोलाको ७१ हजार ५ सय पुग्यो
साउन २९ गते घटेको सुनको मूल्य आज फेरि बढेको छ। प्रतितोला ७१ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी मूल्य हो। यसअघि साउन २८ गते ७१ हजार पुगेको थियो नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले ब...
deshsanchar.com . ११ महीना अघि
काठमाडौँ–केहि दिन यता लगातार बढेको सुनको मूल्य बुधबार घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सात सय रुपैयाँले घटेर छापावाला सुनको मूल्य ७० हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।...
दूधको मूल्य बढ्ने, सरकारले बनायो कार्यदल
onlinekhabar.com . ११ महीना अघि
२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले दूधको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कृषक र व्यवसायीको दवावपछि दूधको मूल्य बढाउने निश्कर्षमा पुगेको सरकारले त्यसबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न ८ सदस्यीय का...
imagekhabar.com . ११ महीना अघि
काठमाडौं, साउन ३० । किसानले दूधको मूल्य बढाउन दबाब दिएपछि सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । दूधको उत्पादन लागतका आधारमा अध्ययन गरी मूल्य सिफारिस गर्नका लागि बुधबार कृषि तथा पशुपंक्...